Muqdisho Disembar 2015 (W/Q: Yusuf Garad) | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Muqdisho Disembar 2015 (W/Q: Yusuf Garad)
Muqdisho waxaan ka dhoofay Disembar 1990 ka dib markii aan
Laanqeyrta Cas uga soo shaqeeyay Berbera, Hargeysa, Burco, Beer, Borame iyo gobolka Awdal degmooyin iyo tuulooyin ka tirsan ilaa Weeraar. Waxaan
Muqdisho dib ugu soo laabtay May 1994 iyada oo magaaladu ay u kala qeybsan
tahay laba hoggaamiye kooxeed iyo malliishiyadooda oo qabiil iska ahayd.
Intii ka dambeysay celcelis ahaan ugu yaraan sannad kasta hal mar
ayaan imaanayay magaalada. Inkasta oo sannadaha qaarkood saddex ama afar jeer
aan imid. Waxaa jiray xilli ay xirnayd gegida dayaaradaha ee Muqdisho oo
laga soo degi jiray shan garoon oo kala duwan oo mid kasta uu haysto Hoggaamiye
kooxeed qabiil dabada kula jira. Bartamihii 2012 wixii ka dambeeyay inta badan
waxaan ku noolahay Muqdisho.
In ay aad u yaraadeen amaba ay ku dhow yihiin in ay suulaan rasaasta habeen iyo maalin markii xoogaa la joogaba la maqli jiray. Taas xaafadaha dhan
In muuqaalka baabuurta magaalada dhex yaaceysaa ay tartiib isu beddeleyso. waxaa sii yaraanaya kuwa muuqoodu ku xasuusinayay wixii magaalada ka dhacay waxaana ku soo badanaya baabuurta qurqurxoon ee raaxada, Waxaa soo badanaya dhismayaasha qurqurxoon ee magaalada. Waxay isugu jiraan qaar xafiisyo ah oo ah dabaqyo dhaadheer sida daaraha ay Hormuud iyo Dahabshiil ka dhisteen aagga nambar Afar iyo daaraha la teedsan Bakaaraha. Waxaa iyaguna jira guryo iyo goobo ganacsi, qaar waxaa dhistay sharikado waaweyn,
qaarna dad hantileey ah, qaar kalena waxaa dhistay dad dowladda hadda ama hore ugu shaqeeyay oo ay dad badani tuhunsan yihiin in ay ku dhisteen hanti ummaddu ay leedahay oo ay lunsadeen iyo laaluush ay qaateen.
Magaaladu waxay u qeybsan tahay saddex. Laba qeybood oo waaweyn waxaa u dhexeysa soohdin ilo-ma-qabatay ah. Waa dhinaca Dowladdu ay deggan tahay, ku shaqeysato, howlaheeda sida ay doonto uga fuliso habeen iyo maalin, ayna deggan yihiin dadka dowladda u shaqeeya, kuwa raba in ay u shaqeeyaan iyo kuwa martida u ah iyo shacab badan oo guryahoodu ay dhinacaas ku yaallaan. Dhinacaan waxaa lagu qabtaa qaar badan oo ka mid ah xafladaha ay Madaxdu ka qeyb gasho.
Dowladdu labada dhinac ee magaalada wey tegi kartaa weyna tagtaa. Laakiin dhinac waa dhulkeeda ay ku shaqeysato dhinacna waxaa taga ciidan keliya ama qof madax ah oo si aad ah loo ilaalinayo oo meel tiigsanaya. Habeen aan sidaa u sii fogeyn aniga oo la fadhiya mas’uul sare ayaa waxaa loo dhiibay wargeys ay ku sawiran yihiin dhismayaal waaweyn oo magaalada ku cusub laakiin sannad ka badan uu dhismahoodu socday. Wuxuu ula yaabay sida qof aan magaalada joogin. Waxay ahayd markii ugu horreysay oo uu arko.
Haddii aadan ahayn qof bartilmaameed ah, waxaa ammaankeedu wanaagsan yahay ayaa la dhihi karaa xaafadaha Shacabka. Ilaalo la’aan ayay baabuurtu socotaa, waa la lugeyn karaa habeen iyo maalin, guryahana ilaalo hubeysan ma joogto, hey’ado ma deggana, Xafiisyo dowladeed kuma yaallaan, lamana kala shakisana. Makhaayadaha ayaa fiidkii lagu caweeyaa oo bannaanka la fadhiyaa.
Masaajiddu waa kii aad soo gaarto.
Inkasta oo Dhinaca Dowladda ay dadka badankiis socdaan ilaalo la’aan, haddana mar kasta waxay ishaadu qabaneysaa baabuur dul bannaan ah oo
niman hubeysan oo inta badan uu midkood boobe culus ku raran yahay ay
dhinacyada lugahoodu ka raaracaan. Waxaa laga yaabaa in ay keligood yihiin ama
ay hor iyo daba socdaan baabuur cayilan oo la yiri xabbaddu ma karto oo qof
madax ah lagu gelbinayo ama lagu doonayo. Laakiin waxaa sii gabaabsi ah oo ay adag tahay in aad aragto ilaalo hubeysan oo baabuur saaran oo aan ciidanka Dowladda ahayn.
Waxaad arkeysaa Hotel, Xafiis, dhisme kale oo biro ama dhagxaan
waaweyn jidgooyo ahaan loo hor dhigay oo ay ka dambeeyaan jawaanno ciid ah oo
gadaashooda niman hubeysani ay ku jiraan, qaar taagtaagan yihiin, qaarna
gabbaad kor loo dhisay ay kaa soo dhex eegayaan. Meelaha qaar waxaad mooddaa dhufeys goob dagaal sida albaabka weyn ee laga galo gegida dayaaradaha.
Magaaladu weli tiyaatar iyo shaneemo noocii la yaqaannay ah ma laha.
Wasiirka Warfaafinta ayaa dhowaan igu casumay mar uu Tiyaatarka soo kormeerayay. Aniga oo arday Iskuul ah ayaan Tiyaatarka uga qeyb galay tartankii Kedis – kuna guuleystay, aniga oo
dhallinyaro ah ayaan u tegi jiray daawashada riwaayadaha kuna daawaday fannaaiinta fanka Soomaaliyeed ugu magac weyn, aniga oo weriye ah ayaan xiriiriye ka ahaa munaasabad aan hanti ugu uruurineynay Ururka Indhoolayaasha markii la asaasay, annaga oo arday Jaamacadda ah ayaa riwaayad ka dhignay aanan anigu jilayaasha ku jirin laakiin aan ka mid ahaa qabanqaabiyayaasha, anigu qoraa Xiddigta Oktoobar ah ayaan u tegi jiray in aan ka faalloodo riwaayadaha sida faallo dheer oo aan ka qoray Rowaayaddii Xiddigtii is Xujeysay, waxaan aqaannay Tiyaatarka xagga la fariisto, godka miyuusigga, daaha gadaashiisa iyo qolka tebinta ee idaacadda tooska ugu xiri jiray. Waxaan ogaa quruxdiisa iyo agabkii yaallay. Markii aan dhex istaagay runtii aad ayaan ugu murugooday sida uu u
yaallo iyo waxa uu noqday.
Previous articleDEGDEG: Weerar Alshabaab ku qaaday Mandhera, Kenya oo lagu dilay saraakiil Boolis ah
Next articleFaahfaahin ku saabsan Ciidamo ka tirsan AMISOM iyo Nabadsugid loo dirayo Magaalada Jowhar